Dagaal dhexmaray Ciidamada Bada ee Puntland iyo Burcad badeed oo dhimasho iyo dhaawac sababay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Dagaal dhexmaray Ciidamada Bada ee Puntland iyo Burcad badeed oo dhimasho iyo dhaawac sababay
Dagaal dhexmaray Ciidamada Bada ee Puntland iyo Burcad badeed oo dhimasho iyo dhaawac sababay
December 11, 2012 - By: Khalid Yusuf
Wararka naga soo gaaraya degmada Garacad ee gobalka Mudug ayaa sheegaya in hal askari oo kamid ah ciidamada bada ee Puntland uu ku dhintay iska horimaad ka dhacay degmada kadib markii ay halkaasi gaareen ciidamada oo u socday inay soo furtaan markab ay afduubeen koox burcad badeeda ah.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Garacad ayaa sheegaya inay hada xaaladu degen tahay.
Burcad badeeda ayagu heystay markabka ayaa la sheegay inay weli heystaan markabkii, ayadoo lagu guuleysan waayey in burcad badeeda laga dejiyo markabkaasi.
Kooxda burcad badeeda ayaa la sheegay inay jidgooyo dhanka beriga ah u dhigeen ciidamada soo gaaray meel Waqooyiga ka xigta magaalada Garacad una jirta 30km, halkaasi oo la sheegay in ciidamada iska caabin kala kulmeen kooxda markabkaasi heysta.
Diyaarad ay leedahay shirkada Saracen oo gacan siineysay ciidamada Bada, ayaa la sheegay in burcad badeeda ay rasaas ku rideen. Ayadoo la sheegay in sidoo kale dhaawacyo soo gaareen dhinaca burcad badeeda halka wararkale sheegayaan inuu ka dhintay mid kooxdii jidgooyada u dhigtay ciidamada.
Dhanka ciidamada ayaa la sheegay inuu ka dhintay hal askari halka 3 kalena ay ka dhaawacmeen.
Kooxda burcad badeeda ee markabka heysta ayaa la sheegay inay isugu jiraan kuwo kasoo jeeda deegaanada Puntland iyo koox kale oo ka timid koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Hobya.
Ciidamada Puntland ayaa hada ku sugan meel u dhaw magaalada Garacad halka Burcad badeeda ay weli dulsaaran yihiin Markabka ay xooga ku heystaan kaasi oo yaal meel aan ka fogeyn xeebta, waxaana la sheegayaa in markabka uu soo caariyey balse dushiisa weli lagu heysto shaqaalihii markabka.
Ciidamada ayaa hada la sheegayaa inay isku dayayaan inay go’adoomiyaan burcad badeeda markabka saaran kuwaasi oo difaac uga jira dusha markabka iyo nawaaxiga u dhaw.